अब गाडी र मोटरसाइकल चलाउन महंगो, सडक दस्तुर बढ्यो,यस्तो छ नयाँ दररेट - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अब गाडी र मोटरसाइकल चलाउन महंगो, सडक दस्तुर बढ्यो,यस्तो छ नयाँ दररेट
काठमाडौं । अत्यावश्यक सेवामा हडताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने निर्णय गरी सो को जानकारी राजपत्रमार्फत गराउने भएको हो । सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत्, दैनिक खाद्य वस्तु, बैंक बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन । सो सम्बन्धी व्यवस्थासहितको सूचना छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
सरकारले प्रत्येक ६÷६ महीनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोेकेर हडताल गर्न पाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेतमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
हडताल निषेध गर्दा मजदूरको अधिकार समेत खोसिइला नी भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “एकाध स्थानमा समस्या आउन सक्छन् । तर त्यसले समग्रतामा नै समस्या आउँछ भन्न मिल्दैन । अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न मिल्दैन” ।
यस्तै सरकारले युनाइटेड सिमेन्टसको धादिङ नौबिसेस्थित सिमेन्ट काराखानास्थलसम्म जानेआउने औद्योगिक पहुँचमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि धुनबेँसी–९ मा रहेको रहेको पोखरी डाँडा सामुदायिक वनको शून्य दशमलव १७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
निर्णय अनुसार साविकको दस्तुरमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दै नयाँ दररेट तोकेको छ । यसअनुसार हेटौडा सडक खण्डमा हेभी सवारीलाई १३०, कार, जिपलाई ६० र मोटरसाइकल, तीनपाङ्ग्रेलाई ४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै दमक–इटहरी सडकमा क्रमशः १२५, ५० र १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । विराटनगर–धरान सडकमा ७०, २५ र १० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ भने काँकडभिट्टा–दमकमा ७५, ३०, १०, हेटौंडा–वीरगञ्जमा ८५, ५० र १० रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ ।
वीरगञ्ज–पथलैयामा ५०, २० र १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै धुलिखेल–खुर्कोटमा ११५, ५० र १५ रुपैयाँ र पाँचखाल–मेलम्चीमा क्रमशः ५०, १५ र ५ रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
चौध वर्षअघि हत्या गरिएका जनपक्षीय पत्रकार स्वर्गीय कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को स्मरणमा आज बिहिबार बिहान आयोजित […]
अन्योलमा मेलम्ची: ठेकेदार अझै फर्केनन् ,आयोजना झन् अन्योलमा !
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ठेकेदारबारे स्पष्ट निर्णय नलिँदा मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बन्दै […]
संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छः देउवा
काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले एकलौटी र […]
यस्तो छ रुनुको फाइदा
हाँस्न र हँसाउनका लागि मान्छे अनेक गर्छन् । हँसाउनकै लागि टेलिभिजनमा कमेडी कार्यक्रम चलाइएका हुन्छन् । […]
विश्वमा धनाढ्यहरु कहाँ कति बस्छन ?
एजेन्सी । तपार्इंसँग कति सम्पत्ति भयो भने अर्बपतिको सूचीमा पर्नुहुन्छ? यसको जवाफ एक प्रतिवेदनबाट पाउन […]
मकालु एयर विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको शव काठमाडौं ल्याइयो
काठमाडौं । हुम्लामा बुधबार बिहान भएको मकालु एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका चालक दलका सदस्यको शव […]